स्वस्थ बन्ने र आयु लम्बाउने अचुक उपाय : ओफुरो
काठमाडौ । मानिसको जीवन निकै व्यस्त छ । खानपान र व्यस्त जीवनका कारण चाहेर पनि मानिस स्वस्थ बन्न सक्दैन । तर यस्ता मानिसलाई स्वस्थ भएर जीवन बरदान दिने पद्धती भनेको ओफुरो हो । विश्वमा यो पद्धती निकै लोकप्रिय र प्रचलनमा भएपनि नेपालीहरुलाई यसविषयमा जानकारी कम छ । तर यो मानिस स्वास्थ्यका लागी अति उपयोगी र आवश्यक पनि छ । आखिर के हो ओफुरो ? ओफुरो भनेको…विस्तृत समाचार »
पूर्वाञ्चलमा क्यान्सर उपचार सेवा सुरु
मोरङ । पूर्वाञ्चलमा पहिलो पटक विराटनगरस्थित विराट अस्पताल प्रालिले क्यान्सर रोगको उपचार सुरु गरेको छ । अस्पतालका सञ्चालक डा ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीका अनुसार पूर्व क्षेत्रका बिरामीलाई लक्षित गर्दे विराटनगरमा केमोथेरापीसहित क्यान्सर रोगको सम्पूर्ण उपचार आजदेखि सुरु गरिएको हो । अस्पतालले आजै क्यान्सरसम्बन्धी निःशुल्क ओपिडी सेवासमेत सञ्चालन गरेको छ । अस्पतालले तत्काल ३० वटा शय्यासहितको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । अस्पतालले वरिष्ठ क्यान्सर रोग…विस्तृत समाचार »
एड्स भन्दा खतरनाक ‘सेक्स सुपरबग’
एजेन्सी । यदी तपाई सुरक्षित सेक्स गर्नु हुँदैन भने अब तपाई जोखिममा पर्न सक्नु हुन्छ । अर्थात् एड्ससहित यौन रोगका अन्य जोखिमहरु त यसअघि बाटै थिए नै अब सेक्सकै कारण अर्को गम्भीर खतरा समेत विश्वमा भित्रिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तटीयमुलुक ‘हवाई’मा ‘सेक्स सुपरबग’ नामक एक खतरनाक जीवाणुको दुईवटा मामिला बाहिर आएको छ । जसले विश्वभरका चिकित्सकलाई चिन्तित बनाएको छ । …विस्तृत समाचार »
यी पाँच कुरा जसले तपाइको शुन्दरता बढाउनेछ
२७ फाल्गुन २०७२
फागुन ,काठमाडौ । राम्रो हुने र देखिने चाहना सबै मानिसलाई हुन्छ । अझ विशेषगरी महिलाहरुमा राम्रो देखिने चाहना अत्यधिक हुन्छ । हुनत महिलालाइ शुन्दरताको अर्को नामले पनि चिनिन्छ त्यसैले होला उनीहरु विशेष सचेत हुन्छन् । भिड भाडमा अरु भन्दा फरका देखिन चाहन्छन महिलाहरु । कसरी राम्रो देखिने ,अनुहारमा चमक ल्याउने भन्ने कुरा गर्दा हामीले नियमित रुपमा खाने गरेका केही त्यस्ता पदार्थहरु छन् जसलाई खाँदा मात्र होइन पिँधेर…विस्तृत समाचार »
स्लिम बन्ने हो ? आजैदेखी छाडिहाल्नो यस्ता बानी
२५ फाल्गुन २०७२
स्लिम बन्ने तरिका सजिलो छ । हामीले खानामार्फत ग्रहण गर्नेभन्दा खेर फाल्ने क्यालोरीको मात्रा कम हुनुपर्छ । यसका लागि कम खाने र शारीरिक काम बढी गर्ने गर्नुपर्छ । तर, स्लिम बन्ने बहानामा धेरैले यस्ता बानी गर्नु हुँदैन । दुब्लाइएन भनेर खिन्न हुने व्यवस्थित रूपमा डायटिङ गर्न थालेको सुरुको दुई साता वजन उल्लेख्य मात्रामा घट्छ । दुई सातापछि वजन घट्ने क्रम कम हुन्छ । वजन घट्ने…विस्तृत समाचार »
यी हुन् गाँजा र भाङका फाइदा, यस्ता रोग निको हुन्छन्
काठमाडौँ । भाङलाई आयुर्वेदमा कफ सोस्ने, पाचनवद्र्धक, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तकारक तथा अग्निवद्र्धक मानिन्छ भने गाँजालाई पाचनवद्र्धक तथा शक्ति प्रदायक पनि मानिन्छ । भाङको पातलाई मसिनो गरी पिसेर सुँघ्दा टाउकाको अग्रभाग दुख्ने समस्या कम हुन्छ । भाङको पातको रस निधार तथा टाउकोमा मालिस गरे टाउको दुख्ने समस्या समाधान हुन्छ । एक कचौरा भाङ घ्यूमा भुटेर त्यसमा एकरएक चम्चा मरिच तथा मिस्री मिसाई दिनमा ३–४…विस्तृत समाचार »
तातो पानी पिउनुका फाइदै फाइदा
थकान महसुस भएको छ भने तातो पानीले नुहाउँदा थकान हट्छ। लुतो वा छालासम्बन्धी अन्य समस्या भएका व्यक्तिले तातो पानीले नुहाउनु उपयुक्त हुन्छ। तातो पानीमा थोरै गुलाबजल मिसाएर नुहाउनाले छाला राम्रो हुन्छ। साथै, जीउ दुखेको पनि बिसेक हुन्छ। तातो पानीको सेवनले शरीरमा रक्तसञ्चार सन्तुलित हुन्छ। तातो पानीमा कागतीको रस र मह मिसाएर बिहान पिउँदा रोगप्रतिरोधी क्षमता बढ्छ। बिहान उठेर तातो…विस्तृत समाचार »
निन्द्रा नपुर्याइ नउठ्नुस ,अन्यथा मुटु रोगी बन्नुपर्ला
२३ फागुन एजेन्सी । यदि तपाइ रातमा कम सुत्नुहुन्छ भने यो तपाइको लागि खतरा हुन सक्छ । यसलाइ अनिद्रा (स्लीप एपनिया) को विरामी भनिन्छ । लामो समयसम्मको यस बिमारीले हृदयको रोग लाग्ने खतरा अधिक हुन्छ । ज्यादा कोलस्ट्रोल, ज्यादा ट्रिग्लिसेराइड र उच्च रक्तचाप अनिद्राको मुख्य कारण हो। स्लीप एपनिया भएका व्यक्तिलाइ रातमा पटक पटक श्वास केही सेकेण्ड रोकिन्छ । जसलाइ हृदयको रोग हुन्छ उनीहरमध्ये ८५…विस्तृत समाचार »
भोलीदेखि सबै औषधी कम्पनी बन्द हुने
२२ माघ काठमाडौ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र महानगरिय प्रहरी परिसरको टोलीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएका लोमस फर्मास्युटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिका चार जनालाई अविलम्ब रिहा नगरे औषधी कम्पनीहरुले भोलिबाट सम्पूर्ण औषधि उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । शनिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले औषधि उत्पादन ठप्प पार्ने घोषणा गरे । उनले ‘नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिलाई विना शर्त रिहा…विस्तृत समाचार »
अस्पतालमा विद्युत सेवा नहुँदा विरामीले उपचार पाएनन्
२१, फागुन काठमाण्डौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजि स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गर्दै आएको डेडिकेटेड लाईन (फिडर लाईन ) गत फाल्गुन ११ गतेबाट कटौती गरेपछि अस्पतालहरु बन्दहुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी नियम अनुसार नै विगत २०६५ माघ १ गतेको सुचनाका आधारमा फिडर लाइन निजि स्वास्थ्य संस्थालाई दिदै आएको थियो । सरकारी निर्णय भएपनि त्यसका लागी आवश्क सबै सामानहरुको मुल्य आmैले खर्चेर नेपाल सरकारको निति अनुसार…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 53 54 55 56 57 Older Last ›